Isboortiga jimicsiga sare ee jimicsiga weyn ee jimicsiga dumarka ee leh jeebka dhabarka, Mesh Workout Fitness Bra oo leh soosaarida warshada wadooyinka laga saari karo iyo warshad | Stamgon
Heerka Sare ee Waxqabadka Isboortiga ee Bra ee loogu talagalay Haweenka leh jeebka dhabarka, Mesh Workout Fitness Bra oo leh Pads Pvable
Nambarka Moodeelka: YWQC190701-9
Sharraxaadda: Gabdhaha isboortiga ee haweenka
[Bra saameynta isboortiga ee saameynta weyn] Farshaxanka ugu Weyn: Kubad sameeyahaan aadka u sarreeya ee isboortiga waxaa lagu sameeyay culeys khafiif ah, xoogga qoyaan-xajista, 80% Nylon, 20% Spandex. Sida maqaarkaaga labaad
[Sports Bra with Pocket] Kuwaas yoga braga ah waxaa lagu soo bandhigay jeebka dhabarka taas oo ku habboon in lagu qaado taleefankaaga. Lakabka miiraha xuubka ah ee gadaal-u-kala-baxa oo badan ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud ugu wareejiso. Naqshad sameeyaha hore ee 'Sexy' wuxuu bixiyaa shay gaar ah, wuxuu kaa dhigaa moodada iyo naqshad.
[Yoga Tops Bra] - Yoga top bra wuxuu bixiyaa raaxo fudud oo ay weheliso nuugista dhididka iyo awooda huurka. Waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo khibradda jimicsiga yoga ee haweenka. Yooga haanta sare waxaa loo isticmaali karaa istuudiyaha jimicsiga 'Pilates studio', ciyaaraha banaanka iyo meelaha lagu raaxeysto ee maalinlaha ah, Shift laga bilaabo casriga ilaa daqiiqadaha daqiiqadaha. U muuji waxyaabaha aad jeceshahay iyo ciribta aad jeceshahay, waa la isticmaali karaa sanadka oo dhan.
[Braawut brave leh qalabka wax lagu qaadan karo] Soo riix oo ku dheji gogosha laga saari karo si loogu habeeyo habboon. Koobka la arki karo wuxuu ku darayaa qaab iyo daboolid buuxda, xuubka fidsan oo fidiya dareenka neefsashada iyo qabow. Dhamaan biraha raaxada leh ee leh lakab laba jibbaaran waxay bixiyaan daboolin buuxda iyo taageero, ma fududaan doonaan kadib marka la istcimaalo maydhashada.
[4 way stretch Sports Bra] 4 isku fidin iyo bareejin dhaqso ah oo qallalan oo isboorti ah ayaa ka dhigaya mid aad u deggan oo ku habboon in isboorti la qaato. Waxyaabaha jilicsan iyo kuwa neefsashada lagu neefsado ayaa ku siinaya khibrada ugu fiican ee jimicsiga.
Magaca sheyga: Goob jimicsi sare leh oo jimicsi leh ayaa gashan kara jimicsiga dumarka jimicsiga jimicsiga leh oo leh jeebka taleefanka
Midab: Cagaar, madow, guduud, casaan
Hore: jumlo dhan oo sexy ah gabal dabaalasho ah kor uqaado dharka dabaasha ee dumarka caadada u ah qubeyska
Xiga: Dumarka laga Saarayo Kusoo Bandhiga Kubbadda Cagta ee Kubadda Cagta leh ee 'Bra Yoga' dharka sare ee haweenka loogu talagalay
Gabdhaha Mesh Leggings Yoga Pant oo wata Poc ...
2020 jumlo lab ah oo gaaban oo gaagaaban 4 waddo oo fidsan c ...